Khiyaamada Quruxda Labka: Shea Butter Ayaa Yimid | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | Is-qurxinta
Waxyaabaha la isku qurxiyo ee dabiiciga ah ayaa halkan loo joogaa waxayna helayaan meelo aan waligood laga fikirin. Shea butter wuxuu ku qoran yahay shey dabiici ah oo leh faa'iidooyin badan; Hanti ahaan awgeed, waxay bedeshaa kareemada iyo kiriimyada dhaqameed ee kala duwan. Waxaa si fudud loogu isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan adigoon buuxin xirmadaada qurxinta.
Hadda daryeelka caafimaadka iyo bilicsanaanta ayaa qaatay heer muhiimad weyn u leh ragga. Joogtaynta maqaarka caafimaadka qaba iyada oo aan duuduub lahayn ama daaweyn lagu sameeyo si loola dagaallamo timo luminta waa mowduuc maalinle ah. Iyo si loo gaaro muuqaal dhalinyaro ah oo cusub waa lagama maarmaan in la diyaar garoobo lana ogaado waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo.
1 Xagee buu ka yimaadaa shea butter?
2 Faa'iidooyinka subagga Shea
3 Noocyada subagga shea?
4 Sidee loo isticmaalaa?
5 Kahortaga subagga Shea
6 Cuntada subagga Shea
6.1 Bacda jilicsan ee jilicsan
6.1.1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa loo baahan yahay
6.2 Timo hagaajiye
6.2.1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa loo baahan yahay
Xagee buu ka yimaadaa shea butter?
Waxaa laga helaa lowska geedka shea ee ka soo baxa Afrika. Aborijinku waxay geedkan u qeexaan inuu yahay wax muqaddas ah. Haweenkooduna waxay qabtaan daaweyn aad u ixtiraam leh inta lagu jiro wax soo saarka. Marka lowsku dhulka ku qallalo, waxay u qaadaan inay ku cadaadiyaan oo subagga ka dhigaan.
Sida caqiidooyinka badankood, Aborijinku khalad ma aha. Waa alaab run ah oo muqadas ah saamaynta cajiibka ah ee ay ku soo saarto dadka. Xaqiiqdii qaar badan ayaa maqlay maqaarka caanka ah ee Cleopatra; waxaa jira dukumiinti muujinaya in aasaaska ilaalinta ay ahayd subagga shea ee dabiiciga ah.
Faa'iidooyinka subagga Shea
Waxay dib u soo nooleysaa unugyada. Waxyaabaheeda ayaa ka dhigaya saaxiibka ugu fiican ee daryeelka maqaarka. Waxay nolol cusub siisaa maqaarka maqaarka ee lagu ciqaabo arrimaha deegaanka; natiijadu waa jilicsanaan iyo dhalinyaro.
Waxay ka hortagtaa xanaaqa. Ku habboon in la isticmaalo ka dib xiirashada oo laga fogaado xanaaqa meelaha ugu nugul.
La dagaallama chillains. Ragga ka shaqeeya soo-gaadhista kuleylka hooseeya, isticmaalka saliidda shea waa lagama maarmaan. Gacmahaaga waxay gaarayaan difaac yareynaya jiritaanka chilblains-ka dhibka badan.
Wuxuu qariyaa calaamadaha fiditaanka. Awoodeeda dib u soo nooleyn awgeed waxay sidoo kale heshaa natiijooyin wanaagsan oo ka dhan ah calaamadaha fiditaanka ama astaamaha ka dhasha isbeddelada culeyska.
Qoyaan meelaha qallalan. Waa wax iska caadi ah in rag badani yeeshaan qaybo jidhkooda ka mid ah oo daryeelkoodu ka hooseeyo, ama aanay xallin karin. Qallafsan, cidhib jeexan iyo xusullada ayaa runtii aad u foolxun in la eego oo la taabto. Subagga Shea ayaa u jilciya iyaga si ay u yeeshaan jidh jilicsan oo qoyan.
Wuxuu xoojiyaa cidiyaha. Gacmuhu waa warqad hordhac u ah dadka. Ciddiyaha dillaaca ama qaniinyada ayaa tilmaamaya amni-darrada ama daciifnimada; iyada oo alaabtan dabiiciga ah la jabinayo ayaa la iska ilaaliyaa oo dhalaalka ayaa kordha.
Dabacsanaanta weyn ee maqaarka. Nafaqooyinkeeda ayaa ka dhigaya midka ay doortaan cayaartoyda adduunka oo idil. Duugista subagga Shea waxay u oggolaaneysaa baabi'inta sunta iyo nasashada murqaha ka dib dhaqdhaqaaqa jirka.
Qorrax-ka-qaad Dibedda aadidda maalmaha kulul iyada oo aan waxba laga ilaalin shucaaca ultraviolet waa qalad. Gubashada iyo laalaabku waa uun qaar ka mid ah cawaaqibka; sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho shaashad qorraxeed fudud.
Noocyada subagga shea?
Waa la iibsan karaa iyadoo aan la sifeyn, taasi waa dhammaan hantidiisa dabiiciga ahi way sii jiraan. Nafaqooyinkeeda iyo fiitamiinaduba waxay kujiraan nuxurkeeda oo dhan iyo awoodda qoyaanka iyo fuuqbaxa ayaa ka weyn.
Dhinaca kale, waxaa jira suuqa alaabooyinka horay loo sifeeyay. Tani waxay ka dhigan tahay in habka sharaxaadda kiimikada loo sameeyay ganacsigiisa. Guud ahaan, waxa la raadiyaa waa in laga saaraa midabka hurdiga ah ee fitamiin A siiya, iyo sidoo kale urta dhulka iyo nafaqada leh ee ay dabiiciyan leedahay
Waa wax aad u fudud habka loo adeegsado; wax raggu jecelyihiin tan iyo waqti kuma qaadato. Qaado wax yar oo subag ah gacmahaaga dhexdooda, xoq oo markiiba isku bedel saliid ku faafta aagga si loo daweeyo. Si loo xoojiyo dheecaanka jirka oo dhan, waxaa lagugula talinayaa inaad qaado qaado ku darsato biyaha qubeyska.
Kahortaga subagga Shea
Waa inaysan isticmaalin sheygan dadka qaba xasaasiyadda lowska.
Kuwa xasaasiyadda cinjirka leh waa inay taxaddaraan in la dhigo meel yar oo la arko saameynteeda; Waxay leedahay boqolkiiba aad u yar oo cinjir dabiici ah.
Ka baxsan labadan koox, noocyo badan oo dad ah ayaa ka faa'iideysta sifooyinka shea; carruurta, dadka waaweyn iyo waayeelka ayaa caafimaadkooda ku ilaaliya habkan.
Cuntada subagga Shea
Maqaarka dib loo cusbooneysiiyay ee caafimaadka qaba, sheyga kaligiis xaaladdiisa dabiiciga ah waa mid aad waxtar u leh. Laakiin sidoo kale waxaa jira iskudhafyo lagu samayn karo raaxada guriga oo markaa kordhinaysa faa iidooyinkeeda.
Waxyaabo yar iyo subagga shea, timo hagaajiyeyaasha iyo kareemada ayaa la diyaariyey si loo hubiyo quruxda. Ku kaabis dabiici ah oo daboolaya dhammaan baahiyaha jirka si loola dagaallamo gabowga.
Bacda jilicsan ee jilicsan
Adeegsiga kabaha xiran awgeed, cagtu si fiican uma neefsato; Markaa adkaanta oo u muuqata mid aad u xun ayaa muuqata oo ciddiyaha ayaa isu beddelaya huruud. Samee daaweyntan cusboonaysiiyaa unugyada dhintay oo dib u nooleeya aagga.
Koob shea butter
2 qaado oo saliid qumbaha ah
15 gr of beeswax
10 dhibcood oo ah nuxurka basbaaska
Keen subagga iyo saliidaha isku kari ilaa ay dhalaalaan. Kadib dheriga saar saldhig qabow oo walaaq ilaa ay ka kooban yihiin dhammaan waxyaabaha ka kooban, ku dar nuxurka reexaanta; taas, samee duugis jilicsan. Si aad u keydiso diyaargarowga in muddo ah, weel dhalo ah oo dabool leh ayaa la door bidaa.
Sanado badan timuhu way daciifayaan waxaadna bilaabeysaa inaad dareento dhicitaan aan cidna u eexan. Qalabkan wuxuu xoojiyaa xididdada ka hortagga bidaarta.
1 koob oo saliid qumbaha ah
Koob canab laga dubay
Ku rid dhammaan walxaha baaquli iyo microwave ilaa ay dhalaalayaan.
Dhanka kale qaado weel kale oo ka weyn, biyo ku shub oo ku dar baraf.
Bakeelka yar ku dheji kan kale oo walaaq si aad u sameysid jajab dillaacsan.
Ku keydi weel dabool leh.
Kaabsoolka Vitamin E ayaa lagu dari karaa diyaarinta.
Ragga guud ahaan waqti yar ayey ku qaataan booqashada goobaha qurxinta, laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan u qalmin maqaarka caafimaadka qaba. Sababtaas awgeed talooyinkan oo leh subagga shea ayaa ku habboon iyaga. Dhaqaale ahaan, fududahay in la sameeyo lana isticmaalo, waqti gaaban iyo natiijooyin fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Is-qurxinta » Shea subagga quruxda
Timo dheer timo ragga